Ini ndichangotanga kushandisa Passbook pane yangu iPhone pandakashanyira Starbucks. Kunyangwe ndichidada neangu Starbucks Goridhe Kadhi, Ndinofara kufara kudzikisa kukora kwechikwama changu nekadhi rimwe chete. Ini ndinongotambidza barista foni yangu uye ivo vanokwanisa kuongorora mibairo yangu kadhi ipapo ipapo! Ndichishandisa iyo Starbuck's app, ndinogona kurodha zvakare kadhi rangu zvakananga kubva kufoni yangu futi.
Ngatizvitarisei. Iyo inbox inotambudzwa ne spam faira nyaya uye vatengi vave chiveve kuemail kushambadzira. Nepo kuchine kudzoka kusinga tsanangurike mukudyara nekuda kwemutengo wakaderera weemail, kutariswa idambudziko riri kukura. Kutumira mameseji ndechimwe chinoshamisa tekinoroji tekinoroji, asi vatengi vanowanzozeza kunyorera uye kuburitsa yavo nhamba yefoni kuti vawane. Push notices kuburikidza nesoftware application uye maapps senge Passbook anogona kunge ari ako akanaka kushambadzira kushambadzira mukana.
Takakurukurawo Geofencing, proximity-based marketing nzira inosanganisira SMS (mameseji) kana kushambadzira kweBluetooth. Kana imwe nharembozha yako ikapinda munzvimbo, unogona kusundira zviziviso. Zvakanaka, Passbook inopa geolocation senge zano, futi. Iwe unogona chaizvo kusundira pasiti yekuvandudza kana mumwe munhu akapinda mukati meimwe nzvimbo yenharaunda. Kupfuura zvese, iwe haudi chero yekuwedzera tekinoroji yekuitsigira sezvo yakavakirwa chaipo kubva kune nhare geolocation services
Sezvo Passbook iri kutoda kunyoreswa kwetikiti, kukwira bhodhi, coupon kana chirongwa chekuvimbika, ava ndivowo vashandisi vako vanobatikana. Ivo vakatove vachitsvaga kutsvaga hukama nekambani yako. Uye rutsigiro haruna kungogumira kumadivaysi eIOS, Attido Mobile yakagadzira PassWallet, yeApple app inoshumawo yakajairwa kupfuura packet.